यी चार राशी भएका पुरुषहरु श्रीमती र प्रेमिकालाई अत्याधिक माया गर्छन ! – Life Nepali
यी चार राशी भएका पुरुषहरु श्रीमती र प्रेमिकालाई अत्याधिक माया गर्छन !
कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ । कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् । ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह दशा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ । यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका पुरुषहरुको बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमतीलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ । ****यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ 👇️तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ****
यसो भन्छ ज्योतिष शास्त्र मेष राशी : यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको स’म्बन्ध राम्रो हुनाले एकअर्काको प्रेममा पागल हुने गर्छन् । एकअर्काको समस्या बुझ्ने र एक अर्काको स’मस्या पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरुको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ । यो राशी भएका पुरुषहरु बफादार हुने भएकाले पत्नीसँगको स’म्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ ।
वृश्चिक राशी : यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् । परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पा’गल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् ।
क न्या राशी :खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डु’बेका हुन्छन् । घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् ।
सिंह राशी : उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जि’द्दी र रि’सालु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन् ।
Previous कसरी लि’क भएर आयो अरब गएका नेपाली यु’वतिहरुको अ’श्लिल भि’डियो !
Next प’त्याउनु हुन्न होला तर केटीहरुले नु’हाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सो’च्छन !